Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo shir caalami ah uga qeybgalay dalka Mareykanka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo shir caalami ah uga qeybgalay dalka Mareykanka
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo shir caalami ah uga qeybgalay dalka Mareykanka
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qeyb galay shir looga hadlayo dhaqaalaha Adduunka oo lagu qabtay magaalada Washington ee Caasimadda Mareykanka.
Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo u waramay laanta Afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in u jeeddada shirka ay u tageen tahay ka qeybgalka sanduuqa Lacagta Adduunka iyo Bankiga Adduunka oo sanadkasta qabta labo shir, waxaana la isku xogwareystaa in dowlad waliba waxa ay tabaneyso laga wareysto.
Wasiir Beyle ayaa hadalkiisa ku daray “Sanduuqa lacagta Adduunka iyo Bankiga Adduunka ayaa labo shir qabta, waxaa shir adduunka oo dhan ay isugu timaado, oo ay kala hadasho waxa ay tabanayaan, isla markaana ay u ogolaato inay qaataan deymo horleh”
Mudane Beyle ayaa sheegay in Adduunka uu aad u xiseeynayo dawladda cusub ee Soomaaliya waxaana uu tilmaamay in waxyaabo badan ay ka wada hadleen sidii Dawladda Soomaaliya looga taakuleen lahaa xaga dhaqaalaha.
“Waxaan kala hadalnay sidii dhanka dhaqaalaha ay nooga caawin lahaayeen, iyagoo naga cosaday inaan xoojino dhanka amniga, waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda
Shirka ayaa waxaa ka qeybgalaya wafuud ka kala socoto 200 dal.
Previous articleRa’iisul wasaaraha JFS oo sheegay in Dowladda ay ku shaqeyneyso Aragtida shacabka
Next articleDhallinyaro Tartan xifdinta Qur’aanka uga qeyb galay Kuwait oo shahaadooyin la guddoonsiiyay